Nieves Muñoz. Ajụjụ ọnụ ya na onye edemede nke Agha Silenced | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 21/09/2021 12:00 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela
Foto: Nieves Muñoz, faịlụ onye edemede nke ụlọ obibi akwụkwọ Edhasa.
Nieves MunozNwanyị Valladolid na nọọsụ site na ọrụ, ọ na -emetụtakarị akwụkwọ, dị ka onye na -ede akụkọ mkpirikpi, onye na -ede akụkọ ma ọ bụ onye ntinye aka na akwụkwọ akụkọ. Na Agha ndị dara ogbi emela mmali nke akwụkwọ akụkọ. Daalụ nke ukwuu oge gị, obiọma na nraranye gị ajụjụ ọnụ a ebe ọ na -ekwu maka ya na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ.
Nieves Munoz - Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ: Akpọrọ akwụkwọ akụkọ gị aha Agha ndị dara ogbi. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
NIEVES MUÑOZ: Enwere otu anecdote banyere aha. Daniel Fernández, onye nchịkọta akụkọ Edhasa, gwara Penelope Acero, onye nchịkọta akụkọ m, na gịnị mere na anyị agbanweghị ya maka Agha ndị nkịtị, nke ka mma, ha abụọ anyị na -ajụ n'ihi na ọ na -agbanwe ihe ọ pụtara kpamkpam. Ha abụghị agha a na -alụ na mkpọchi (nke dịkwa), mana ndị a na -agbachi nkịtị n'ihi ihe ụfọdụ. Na nke ahụ bụ isi ihe dị n'akwụkwọ akụkọ.
N'otu aka ahụ, e nwere ndị ahụ agha dị n'ime na n'ọnọdụ oke ala ha na -alụ ọgụ n'etiti onwe ha na ịgaghị agụta ha. Ekwenyesiri m ike (m na -egosikwa ya otu a) na mmadụ nwere ike nke kacha mma na nke kacha njọ mgbe nlanarị ha nọ n'ihe ize ndụ.
N'aka nke ọzọ, enwere agha a na -agwabeghị na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, dịka ọ na -eme n'akwụkwọ akụkọ m, ọhụụ na ahụmihe nke ụmụnwanyị so na Agha Ụwa Mbụ. Ọ bụghị ihe niile bụ olulu, ọgụ ruru n'akụkụ niile.
Echiche mbụ bụ ide a ụtụ maka ndị nọọsụ ọkachamara mbụ onye sonyere n'asọmpi ahụ. Ịchọ ozi gbasara ha ka m ji bịa Marie Curie na ntinye ya dị ka nọọsụ afọ ofufo yana onye nkuzi maka ndị dọkịta na -awa redio. Ọ bụ ya na -eduru onye na -agụ ya ka ọ mata ụlọ ọgwụ ubi na ahụmịhe ya, ma na -ebute ọnụ ụzọ nke ezigbo ndị na -agbachitere, ụmụ nwanyị nkịtị, ndị nọọsụ, ndị ọrụ afọ ofufo, ụmụ nwanyị na -arụ ọrụ ugbo na ọbụna nwanyị akwụna. Ọ bụ a akwụkwọ akụkọ, ya mere, atụmatụ dị iche iche na -agbakọta n'otu na ọkara nke abụọ nke akụkọ ahụ.
Nm: Abụ m onye na -agụ akwụkwọ n'oge, mana ndị mbụ m chetara sitere na nchịkọta Hollister, nke m gụrụ ha niile. Site ebe ahụ ka m gara Ise, Ihe nzuzo asaa, ndị nyocha atọ, nchịkọta nke Amgbọ mmiri Steam… Ana m echeta nke ikpeazụ a na mmetụta ịhụnanya pụrụ iche Ada Scarecrow y N'azụ waya.
Enwere m ncheta obi ilu nke otu n'ime akụkọ mbụ m. Edere m akụkọ maka ụlọ akwụkwọ, echiche efu banyere dinta nke gbagburu mgbada na akụkọ ọhịa mere dinta ka ọ bụrụ mgbada ka ọ wee mata mmebi ọ mebiri. Onye nkuzi jụrụ m ma ha enyerela m aka wee zaa mba. Anọ m na -eche ụbọchị ahụ n'ihu ihe mkpuchi uwe, taa m ahụhụ maka ịgha ụgha.
Nm: N'ezie, enweghị onye isi edemede. Agụrụ m akwụkwọ akụkọ niile ma ọ siri ike n'ụzọ ahụ. Ma m ga -akpọ ụfọdụ amaokwu m.
- Na fantasy, Tolkienn'ezie, kamakwa Ende ma ọ bụ karịa China Miéville.
-Akụkọ sayensị emeghị eme, Ursula K. Le Guin na Margaret Atwood ha dị egwu.
- Oke egwu, ọ masịrị m nke ukwuu na onye edemede Spanish, David kwuru. Mgbe ahụ, ndị ochie, Poe ma ọ bụ Nwoke si Maupassant.
- N'akụkọ ihe mere eme, Amin Maalouf, Mika Waltari, Noa gordon, Toti Martínez de Lezea o Ndị mmụọ ozi nke Irisarri.
- Akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, Sándor Marai, Donna Tarnye onye nke m nke amabeghị nke ọma mana onye ga -enye ọtụtụ ihe ikwu maka ya: Antonio Tocornal.
- Banyere akwụkwọ akụkọ mpụ, aga m ewere ya Stieg Larsson, Dennis Lehane y John na -eche.
- Na ihunanya na Paulina Simmons y Diana Gabaldon.
Nm: Kedu ajụjụ siri ike. Aga m agba maka nostalgia. Agụrụ m akwụkwọ Anne nke Green Gables n'oge uto na site n'oge ruo n'oge, n'ụbọchị isi awọ, agụrụ m ha ọzọ. Ha na -ewetara m udo. Ya mere ana m edebe Ana Shirley.
Nm: Abụ m onye edemede n'okporo ụzọ site n'ike, n'ihi na ọ bụrụ na ejighị m ohere na oge ọ bụla dee ihe, agaghị m emecha ihe ọ bụla. Naanị ihe bụ na m na -arịa tinnitus (ana m anụ mkpọtụ mgbe niile) na Ọ masịrị m ka m ghara ide ede maka na ọ na -enye m nsogbu. N'ihi ya, m na -etinye TV, egwu, ma ọ bụ ọ bụrụ na m nọ n'èzí, mkpọtụ gburugburu ebe a.
Nm: N'ụzọ bụ isi dị ka ajụjụ gara aga, mgbe ha hapụrụ m na m nwere ike were laptọọpụ, ebe ọ bụla na oge ọ bụla.
Nm: Echere m ajụjụ a. Ọ na -amasị m ịgbanwe nke ụdị ọgụgụ, ma ọ bụghị, ịgụ akwụkwọ ga -agwụ m ike.
Nm: M nọnyeere Toletum, de Mireia Gimenez Higón mgbe emechara A kpọlitere ya n'ọnwụ, n'aka onye ibe m Vic echegoyen. Nke mbụ bụ ihe egwuregwu etinyere na Toledo na narị afọ nke 1755 na nke abụọ na -akọ ihe mere n'oge ala ọma jijiji Lisbon nke XNUMX.
Ihe ngosi ka m mechara akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ akụkọ nke abụọ m, nke dị n'aka onye nchịkọta akụkọ m, yabụ ana m ewepụ ụbọchị ole na ole ịde ihe, n'ihi na usoro ahụ siri ike.
Nm: Abịala m n'ụwa a ma amaghị m ma m nwere ike ikwu okwu na ihe ọ bụla. Ọ dị m ka enwere otu obi ọjọọ na -enye akụkọ akụkọ na ọ bụghị ọtụtụ ahịa. Ịnọrọ mmasị na akwụkwọ akụkọ nwa oge siri ike na ọtụtụ akwụkwọ. N'aka nke ọzọ, ndị nsogbu piracy Ọ bụ ihe otiti na -edozibeghị. N'ihi ọrụ gụnyere ide ezigbo akwụkwọ ọgụgụ, ọ bụ ihe nwute na ejighị ya kpọrọ ihe nke ọma.
Ezitere m ihe odide ahụ na-enweghị atụmanya ọ bụla, eziokwu ahụ bụ na edechaala m akwụkwọ akụkọ nwere peeji 540 abụrụla m ihe ịga nke ọma. Yabụ na ihe niile na -esote bụ ihe ịtụnanya, ọkachasị echiche ndị na -agụ akwụkwọ kwadoro ihe odide na akụkọ ha. Anaghị m agbanwe nke ahụ maka ihe ọ bụla n'ụwa.
Nm: Ana m enweta ihe ọ bụla na ahụmịhe ọ bụla, ọbụlagodi nke kacha sie ike. Ana m ebi ndụ kwa ụbọchị na ọrịa, ọnwụ na ọdachi. Na ọbụna ọnọdụ ndị siri ike na -apụta akụkọ mara mma. Ọ dabere na iso gị, n'ihe ị na -etinye aka na ndị ọzọ, ihe ị na -enye site na onwe gị. Dịka m kwuru na mbido ajụjụ ọnụ a, onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike nke kacha mma na nke kacha njọ, ana m agbalị mgbe niile ịchọ ihe ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Nieves Muñoz. Ajụjụ ọnụ ya na onye edemede nke Agha Silenced
Leon Felipe. Ncheta ọnwụ ya. Ụfọdụ uri